Mahwindo dhiabhori, asi vazhinji vanoishandisa | Kubva kuLinux
Ehe, iwe paunopinda webhusaiti yeLinux, munhu wese anotaura zvakaipa nezveWindows, kupatsanurwa, mavhairusi, kuti zvakashata, kuti ndeyezvinhu uye zvimwe zvinhu chiuru.
Zvinonyadzisa kuti gare gare avo vanochemera kudenga nezve huipi hweWindows, iyo NSA nehumambo hwakaipa, vanowanzove vekutanga (kwete nguva dzose, asi kazhinji kacho) kuve nebhutsu mbiri uyezve, mukunyepedzera kukuru uku, Ivo vanokwanisa kugadzira chiuru chekupembedza, kuti kana zviri zvebasa, kuti kana zviri zvemitambo, izvo kana zviri zvePhotohop.
Nguva zhinji avo vanozviti imhaka yemitambo, ivo vakafanana nemaforamu uye mawebhusaiti e linux, vakati kana Steam yakatakura Dota 2, havangashandise Windows zvakare (kunyepa!)
Hunyengeri hunowanzofemerwa munzvimbo ino hwakanyanya, kupa muenzaniso wakanaka, vanhu vamwe chete vanochemera kudenga nezve Windows rezinesi, vobva vatenga iPad, iPhone kana chero Apple Gadget, vachindiyeuchidza nezveavo vanhu vanokuudza zvekuita asi havazviite (sevanhu vazhinji vanonamata).
Ini ndinokumbira vanhu kuti vaenzane, kana uri kushandisa Windows, ndapota usatiudza kuti haufanire kuishandisa, kana uri kushandisa Apple Gadget, usauye kuzotidzidzisa seStallmanian yakavhenekerwa nezve mabhenefiti erusununguko uye kutiranga neshamhu yeLPG.
Murume we "mweya" miviri anochinja munzira dzake dzese akati bhuku rekare, rarama uye rega urarame uye uenderane nezviito zvako, usatsvage kune vamwe, izvo kunyange zvaunokwanisa kuita iwe.
Ndapedza, ndinobvisa ngowani yangu kune avo vakakwanisa kuita vasina zvese izvi zvekushandisa uye zvinoenderana nezviito zvavo nemazwi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Mahwindo dhiabhori, asi vazhinji vanoishandisa
Ini ndinoshandisa linux, ini handishandisi windows nekuti ichokwadi uye ini handitambe kana kuyedza kugoverwa kwakawandisa zvekuti ndakaedza gumi%
… Rarama uye rega tirarame…
Vaya vashandisi vaunoshoropodza vanogona kukuudza izvozvi, nekuti vane kodzero yekushandisa chero Gadget yavanoda, kunyangwe kana unyengeri hwavo huchivabvumidza kuti vazivise kuti Windows kana Apple idhiabhorosi. Haufunge shamwari?
Zvisinei, ndinonzwisisa kushoropodza kwako uye kutanga kwezvose ndinoremekedza maonero ako. Ini ndiri mumwe wevashandisi avo vakakwanisa kurarama vasina Windows pamakomputa avo kweanopfuura makore manomwe. Kubasa ndine PC-mbiri-bhuti uye nei uchinyepa? Ini ndinopinda muWindows kunotamba NFS, Hawks nezvimwe zvakadaro. Ini handibvise Windows nekuti PC yakabva kufekitori senge uye nei uchiisa imwe pirated Windows pairi gare gare?
Zvisinei, vese vanoita dhiramu ravanoda neganda ravo.
Kutendeseka, ini handizive kuti iyi posvo ndeyei, chii chiri chinangwa chayo, kugadzira murazvo?
Pandev, nditsanangurire ipapo ... zvinofanirwa kunge zviri zvekuti sezvo ndaswera mangwanani ndisina kurara, ndave kunonoka nhasi.
Sezviri pachena akatambura kushungurudzika mushure mekurwa kuri pachena nevashandisi veGNU / Linux vachishandisa Windows hahaha.
Asi ega mabloggi ndeekukuvara, kana kwete? 🙂
Hahaha ichokwadi chaizvo, posvo yacho haipi chero chinhu chinobatsira kunze kwekuburitsa kushungurudzika kwake
Ari kuuyirei? Zvakanaka, zvakapusa, pano inogara izere nema anti Windows uye anti Apple makomendi uye zvobva zvazoitika kuti kune katsi ina dzisinga dzishandise, kana uchizoishandisa, usamhanyisa dzimwe.
Kutaurisa kubva kuWindows? 🙂
Pindura kuna Alecs
Sezvo posvo yacho isina musoro sevaya vanopfeka zvakanyanya pa Open Source hembe vozotenderera vachibvunza mashandisiro eMMS Office newaini ... (parutivi ... vanhu vezvinamato vanei ne SW yemahara ??) ... sezvaanotaura. tenzi, zvese zvakanyanyisa zvakashata ... nyaya yangu semuenzaniso, ini ndiri fan of 2 yemifananidzo yakajeka inovengwa nevazhinji vevanyengeri (Metro kubva kuhwina 8 uye Kubatana kubva kuUbuntu) uye zvakadaro vane zvikonzero zvakawanda zvekuramba vachizvishandisa ... ndinovada Apple zvishandiso uye masitayera avakasiirwa naDaddy Jobs, kunyanya iwo ari patafura ... Ndinoda mitambo yemavhidhiyo uye nezvimwe ... asi pakupedzisira handina mac ... kana kuhwina, kana ubuntu (zvakanaka, ndoda) ... ine yangu dell studio ine yekutanga element os ... amen hahahaha
Ini ndaifunga kuti kune trolls yarova nhasi, asi zvinoita sekunge vadzokera kubasa.
Ndine Debian kumba, asi kubasa pakombuta isiri yangu ndine Windows 7 yakaiswa yandinoshanda nayo, pamba pakombuta yangu ndinoidzivirira, kana chero nguva ndichifanira kutora basa kumba kana risingakwani Ini handina imwe sarudzo asi kushandisa chishandiso chemidziyo, chandinoita kubatana kuburikidza neVPN kukombuta yebasa kubva kumba uye kushanda kure.
Chinhu chimwe chete ndizvo zvatinoda kuva nazvo uye chimwe chinhu ndizvo zvatinofanira kuva nazvo, kazhinji tinofanirwa kushandisa maturusi edzimotokari semutemo webhizinesi, semuenzaniso mafaera akagadzirwa neLibreOffice anoenderana neMicrosoft Word asi kwete 1005 zvinosuwisa.
Ini handisati ndambove fan hombe yemhinduro dzakavhenganiswa, nekuti ini ndinofunga kuti pakupedzisira iwe unoguma uine zvese zvinokanganisa uye hapana chimwe chezvakanaka. Paunongopinda muLinux, ndine nguva yakaoma yekufunga nezve kushandisa Windows zvakare. Uye izvo zvakanditorera mwedzi mitatu kuti ndive 'akagadzika' mushandisi, mushure mekurodha komputa yangu kakawanda uye kudzoreredza akawanda ma distros. Iye zvino ndaona mwenje uye ndiri kufara neUbuntu hwangu, hwese hunokurumidza uye hwakagadzikana uye ndinokwanisa kuwana zvishandiso zvakajairika zvandinoda. Ini ndinobvuma kuti ndakasiya pamitambo yeAAA, asi ini handina nguva yeizvozvo uye ndinogona kushandisa NDS nePS3 emulators kuti ndive akapindwa muropa. Chiyero, kunyangwe mwenje nemimvuri, zvakanaka. Iye zvino ndinogona kutaura zvine hungwaru kuti hongu, Linux iri nani OS
Post inotarisa marimi emoto akaiswa. Zvakanaka chokwadi chinoratidzika kwandiri kuti chimwe chinyorwa chisingaendi nemusoro weblog, kunyangwe ndichiremekedza zvirimo uye nemunyori wazvo, pamusoro pekubvumirana pane zvimwe zvikamu zvezviri mukati, zvinoita kwandiri kuti haisi fomu kana nzvimbo yacho.
Ndine kumba kambani yangu 3 netbook uye desktop ine mbiri bhutsu. Mukudaro, ndakariisa sezvizvi kana ndikada imwe chirongwa, asi ndaona zvandakaona munguva pfupi, ndichasiya zvikwata zvese neMagic 4, iyo yatove munzira chaiyo. Kubasa zvinokwanisika kuti titarise Linux kushanda nemaseva ari kure, nekuti marezinesi akakosha mari uye zvinoenderana nechinhu ichi uye nezvinoitwa nemushandisi zvakajairika, pane zvakawanda zveLinux pane vatengi.
Pindura kune rocholc
Eriya RM akadaro
99% yenguva yandinoshandisa Linux, ini handikurudzire kushandisa Windows uye ndinoshora avo vanoibira, asi ndine bhutsu mbiri ine Windows (yekutanga) uye Linux. Mune yangu nyaya, ini ndine Windows nekuti ini ndiri wepamberi-chikuva application yekuvandudza uye mimwe mitambo haiende newaini.
Ini handioni iko kunyengedza kuri, chero munhu paanobvunza maonero angu ndichavaudza kuti Windows haisi sarudzo yakanaka, kuti vanoshandisa Linux pese pazvinogoneka uye vosiya Windows yezviitiko zvisina imwe nzira.
Usakanganwa kuti ndiwo maonero angu, hazvisi zvinyadzo kushandisa Windows.
Pindura kuna Elías RM
pandev92 Ini handikuzive iwe pachako asi izvo zvawanyora ichokwadi senge tembere uye ndinonyorera kumakoma ekunyora kwako. Izvo zvaunonyora ipfupi asi zvipfupi uye iwe unoisa munwe wako padambudziko.
Ini ndinoedza kuenderana nezvamunonyora uye pamakomputa angu, kunyangwe ndiri mushandisi wekutanga, iyo Windows monopoly haina kushandiswa zvachose. Ini ndinoedza kudzidza GNU / Linux uye ini ndinoshandisa izvi zvinoshandiswa.
Izvo zvinoitikawo kuti makomputa efekitori anoshandisa kuomarara iyo yakaedzwa uye kuenzanisirwa yeWindows uyezve, kana iwe ukatenga komputa hauna zvimwe zvaungasarudza kunze kwekutenga Windows uye mushure mekubhadhara rezinesi haisi nyaya yekuirasa. Neichi chikonzero pandakanga ndichitenga komputa ini ndakatenga imwe yekoni uye ini handina kana dambudziko nazvo. Ndinotenda ndinowirirana nezvandiri kufunga nezvehumambo.
Rudzii rwekupinza urwu? Ini ndaifunga iyi yaive blog nezveGNU / Linux, kwete kushoropodza vanhu pane zvavanoita kana zvavasingaite.
Ini ndiri Windows uye GNU / Linux mushandisi uye ndinogara ndichiti unofanirwa kuita pasina Windows zvakanyanya sezvinobvira, asi dzimwe nguva haugone.
Uye kana munhu akasarudza kukurudzira GNU / Linux kune wese munhu achishandisa Windows, dambudziko riripi?
Urarame uye rega urarame? Zvakanaka, iwe unofanirwa kuisa nyaya uye kuenderana nekuti hunyengeri hwako hunonhuwira kubva pano. Kurega vamwe vachirarama zvinoreva kugara kunze kwebhizinesi ravo uye pakupedzisira kuvarega vachiita zvavanoda.
Chokwadi ndechekuti handizive kuti unoita sei kuti zvinhu izvi zvibuditswe. Ini ndinonzwisisa kuti kune vanyori vakasiyana, asi kuverenga maonero uye kushoropodza zvisina maturo pane zvataurwa Ndinovimba izvi zvisina maturo hazviwanzoitika nekuti unozoshandura rimwe remablog mashoma nezveGNU / Linux muchiSpanish kuita marara.
Ini "ndashandisa" Linux kwenguva yakareba, ndinofunga yaive yekutanga vhezheni yekushandisa RedHat 5, uye zvakandibhadharisa zvakanyanya kuiisa zvekuti handina kuifambisa kusvikira fedora yabuda. Kunyangwe ini ndaigara ndichiine yakasarudzika Windows muchina nemitambo, iyo Linux Timu yaishandisa iyo kufamba uye kuyedza.
pandinoenda kunodzidza zvemacomputer sainzi imwechete ikombuta ine linux (desktop), uye komputa ine windows nemitambo, VS Studio SQL Server, zvinova ndizvo zvavakatibvunza kuyunivhesiti.
Zvino pandakatenga laptop yangu yekutanga, yaive nemawindows maviri vista + Ubuntu (ndiyo yega yaishanda newifi panguva iyoyo) ipapo ndakazobhowekana nekukurumidza uye yaingoshanda nema windows vista.
Pandakatanga kushanda pane masystem, ini ndaishandisa macos pamaseva, uye desktop ndaishandisa Windows. yakafanana nyaya yekuenderana inoenderana 🙁
Mubasa rangu razvino tiri vekudyidzana neMicrosoft saka vakandipa Lumia 800 ine windows foni uye ndine lenovo e431 muchina une windows 8.1 (ndisati ndawana lenovo x200 (diki ine doko, ini handirangarire iyo chaiyo modhi) ine windows 7). Nyaya iripo ndeyekuti nekuda kwenhamba yematafura ari kure, 95% ayo ari Windows neCisco VPN network. Ini ndinonyanya kushandisa maviri Shrew zvirongwa zveiyo vpn (iri zvakare ye linux uye OSX 🙂 uye inobatana kune anopfuura imwe vpn panguva imwechete zvinoshamisira) nyaya ndeye mutengi weRDP. Ini parizvino ndinoshandisa Codeplex Terminals. Iine chaizvo zvandinoda. Chirongwa chine tenzi password, ndinogona kuisa zvese zvitupa uyezve kana ndichigadzira muchina ini ndinosarudza iyo yakambopinda chitupa uye ndinogona kuwedzera ma tag kune kubatana. Yakanyanya kugadzikana uye yakatsiga mhedzisiro, kunyanya kana uine akati wandei vpn, azure, rackspace, amazon michina. etc. pamusoro pekushandisa ingangoita iyo skrini yese kana uchinge wabvisa mamenu, shandisa tabo kuchinjika kubva kune imwe desktop uchienda kune imwe yakasununguka uye yakawanda nzvimbo yekushanda.
distro yangu yandaisarudza ndiFedora, asi ini ndichangobva kuyedza Elementary nemaviri matweaks. Ini ndaida chaizvo iyo yakatetepa-pani kana chimwe chinhu chakadai, kuwedzera padoko rakanyatsogadzikana.Mhedzisiro yaunogona kushandisa yakazara skrini kuti ushande inonyatsogadzikana, dambudziko nderekuti vatengi veRDP vanoyamwa, huwandu hwenzvimbo yavanoshandisa mumamenu uye mapaneru ayo hazvibatsiri munhu. ivowo havana smart scaling. Ini ndaishandisa vhiniga, remmina, uye yakawanda sei chirongwa chandakawana uye hapana chakafanana netemu. zvisina basa kutaura nezve maonero. Pachine kusimbiswa kwakawanda pane dhizaini yekushandisa kwe linux, kuwanda kweminimalism uye mashandiro, ndosaka ndichifunga kuti Elementary, kunyange iri tsanga tsaru, vanhu vazhinji vanozvifarira. Kunyangwe dai yaive yakavakirwa pane fedora zvingave zvakanaka. kubva pane zvandakaedza pane fedora makumi maviri, zvirinani kuti gnome vanhu vari munzira nekubvisa mabara uye kuwedzera nzvimbo.
zvirinani izvozvi tiri kutora matekinoroji matsva uye zvishoma nezvishoma isu tiri kusanganisa mamwe linux maseva, asi mukuru wangu anofarira ubuntu uye angu centos uye nhaurirano dzinotangira ipapo. parizvino pane zvimwe zvikwata zvine Centos 😉
Nezvechinyorwa, ini ndinofunga chinofanira kunge chiri chechokwadi, munhu anoshandisa izvo zvinonyanya kugadzikana uye zvakagadzirira.
Nhema, ndinokuda, asi handizive kuti iwe gehena waida kuita nei ichi positi.
Takatobata nezvenyaya yemhando yepamusoro muDL uye unobuda neizvi ... Chii chakaitika? Wakanyorera here ukamutumira uchifunga iyo YOLO? Kwete damn, kwete ¬¬
Hahahahahaha! .. .. wandisekesa .. xD
Zvakanaka, ini handishandisi kana handina Windows, ini ndinongova neLinux uye OS X 😛
POSIxero kusvika parufu.
Ini ndinofunga kuti poindi ndeyekuzorora uye kushandisa zvinoshanda kwauri. Ini ndinoshandisa Gnu / Linux kune zvese kunze kwemitambo yemavhidhiyo nekuti kunyangwe paine steam uye mitambo yakawanda yatama, rutsigiro rwe AMD neNvidia rwuchiri lousy.
Ini ndinofunga pfungwa yacho haisi yekuve fan uye kuzvirova wega nekuti mumwe munhu anoshandisa yakatarwa brand kana kwete.
Compadre to "posts" seizvi, ndaiisa mumakotesheni nekuti ishoko rechirungu, unofanirwa kuisa izwi rekuti pamberi paro, nekuti ndizvo zvawakangonyora.
Chero zvazvingaitika ndinobvumirana newe, ini ndiri antilinux pakombuta, iwe unoziva kuti ndinofarira kuishandisa pamaseva uye nezvimwe zvakadaro, asi pane desktop ndinoivenga, uye kana ini ndichida chimwe chinhu muchirongwa ichocho saka ndinongochimhanyisa pamushini chaiwo , uye ini ndinoti, vese vashandisi vari kunyunyuta kuti kana Windows kana kwete Windows wadii waita zvakafanana? Yakazara hapana munhu ane dambudziko kuzviita, handiti?
Pachokwadi Cocolio, ini handibvumirane, ndinofunga kuti muhupenyu hwako waona desktop yakarongedzwa zvakanaka, zvinoitika ndezvekuti vanhu vanoona kubatana uye gnome, havavade uye ivo vanoti linux yakaipa pane desktop. ! Iwe unofanirwa kuona iyo Openbox kana yakagadziriswa Enlightenment! Izvozvi ndiri kushandisa Openbox, zvese zvese zvandinoita nema keyboard mapfupi, ndine linux Wallpaper uye conky, uye mune ramangwana ndinogona kuisa dock / bar kana chero chii.
Mukoma munofunga ndinotaurira turnip here? hahaha kwete ipapo, tanga…. Zvakanaka Kubatana kunoratidzika kwandiri kunge marara akaipisisa pasi nekure, sinamoni uye mumwe wake akapwanya desktop yaive yakanyanya kunaka seyaive Gnome, yaive iyo yandaishandisa nekuti yaitaridzika kunge inogadziriswa uye isina kopi rakachipa reWindows (chero vhezheni) , Ndaisa huwandu hunoshamisa hwemadoko, conky, tafura uye yakareba etcetera.
Nei ichiyamwa padhesiki? Imwe, kunyanya iwo madhiraivhita anonyangadza, tisingataure iwo akavhurika vhezheni ayo anorwadza chaizvo, saka zvakanaka kuita zvigadziriso uye mamwe ari musoro chaiwo, chokwadi ndechekuti handikwanise kumira, ndosaka ndichida kushandisa Windows, handina ndaifanirwa fomati kwemakore uye zvinoshanda kwandiri, hazvigoni kunyunyuta.
1. Ini ndarasikirwa nemhinduro kune yako komendi mukupindura kune hombe posvo
2. Matambudziko ekuvandudza? Zvakanaka, ini handizive nezvako, asi kwandiri chinhu chakanyanya kugadzikana munyika ye linux ndizvo chaizvo izvo, kugadzirisa zvinhu, ingave iyo kernel kana desktop desktop. Ini handifanire kunge ndichi dhawunirodha yega yega chirongwa zvakasiyana uye nekuvandudza, iyo mumawindo inogona kutora iwe wakareba uye unonetsa masikati Kana maererano nekuvandudzwa iwe uchireva madhiraivhita egrafiki, semuenzaniso ini ndinoshandisa izvo zvitsva zvine nvidia mifananidzo kubva panguva yePleistocene uye ini handina kumbobvira ndave nematambudziko ekugadzirisa madhiraivhita egrafiki, ini handinzwisise zvakanaka zvaunoreva neicho kugadzirisa
Nekudaro, ini ndinobvuma kuti emahara emadhiraivha madhiraivha ane zvimwe zvinoshomeka, asi iwe unofunga kuti vatyairi vemidziyo vanobva kumakambani vanoziva mifananidzo yavo senge kuseri kweruoko rwavo, uye zvakadaro kuti vape muenzaniso, nouveau akakwanisa kugadzira mutyairi girafu iri kuita reverse engineering kune kadhi, izvo zvinotora basa rakawanda. Zvinoita sekunge mangwana ini ndinogadzira tekinoroji inonzi TOT (Totally Obfused Technology), ndeyechokwadi muridzi, uye ndinogunun'una nezvenzira dzemahara nekuti hadzinyatso kuenderana ne Hardware iyo TOT inoshandisa, pasina kufunga kuti vanosiya hupenyu hwavo kuti vaite reverse engineering pamagajeti ane TOT kunyora yemahara vhezheni ...
Mune maonero angu ekuzvininipisa iyi posvo haibatsiri chero chinhu chakanaka. Usakanganwa kuti vashandisi veiyo isingazivikanwe zita OS 😉 vari (isu tiri) vatapwa vashandisi. Izvo zvinofanirwa kupembererwa ndezvekuti vanhu vanokurudzirwa kushandisa GNU / Linux (kana chero zvatinozvidaidza) nepavanogona napo. Kushandisa software yeimba hakufanirwe kuve chikonzero chekuzvidza, zvinoita kwandiri.
Vashandisi vane miviri miviri vakavapo kwenguva yakareba uye vacharamba vachivapo ... havangofanirwe kugadzira posvo yerudzi urwu, ivo vanoshanda sekudya kwetrolls
Nehurombo, ini handikwanise kusvetuka pamusoro peiyo chipingaidzo chehofisi, kunyanya pabasa, nekuti kubva panguva iyoyo zvichienda mberi haugone kupokana nezvazvino, uye ndaedza kutsvaga mabhuku ekushandisa LibreOffice asi handisi kuwana emanyowani muSpanish (pamwe pane bhuku rakazara uye ini handina kumubata), asi iyi poindi yemutauro ini handiite sekushoropodza nekuti kana ukati nekuti chinhu hachipo, unofanira kuchigadzira, nguva.
Mune zvese izvi zvehunyanzvi zvakasikwa ndinofunga kuti hazvina kukodzera kutsoropodza uye kupokana neWindows, munhu wese anofanira kushandisa zvaanoona zvakakodzera, pamwe iyo GNU Pro ingandipise padanda asi handina hana mukushandisa proprietary software, kunyangwe ichi chisiko chingave chiri nani dai zvese zvaive pachena. Ini ndinoshandisa GNU / Linux nekuti ndinoifarira, kwete nekuti ndeye mahara, uye ndinonzwa kugadzikana muLinux pane muWindows, asi kusvikira Linux isina nzvimbo paDesktop ichave ingori nzira yakanaka kwazvo kune iyi monopoly.
Ini ndaona dambudziko neLibreOffice nhasi mukuenderana kweiyo doc kana mafomati edxx eW., Ini ndinofunga idambudziko risina zvakawanda zvabuda, asi imwe nzira ndeyekusiya iyo faira uye mafaira eHTML (unogona kubvuma kutumira mafaira PDF kana kuitarisa nehurombo kuenderana muLibreOffice). Kana ivo vakakukumbira kuti utumire muIzwi zviri nyore kutendeukira kuvanhu uye kuvaudza kuti iwe haubate software iyoyo, kuti unovagadzira zvakasiyana uye nekuvapa iyo PDF (kana iri yakapusa dheti ine mashoma mafomati kana chiri chinhu chisina kunyanya kukosha). Kana iwe ukaizoishandisa kugadzira yako wega mishumo uye kuipfuudza kune PDF, ini ndinofunga hapafanire kuve nedambudziko mukuishandisa uye pachave nemanopfuura bhuku rimwechete kunze uko (rine rubatsiro rwakanyanyisa rwakawanda zvakare).
Haisi nekuti iwe uri troll, asi panguva ino, iwe wakangoita moto unozobata tarisiro yetroll.
Kubva pakutanga ndakati ndiri kushandisa yangu Windows Vista SP2 Dual-bhutsu naDebian Wheezy, uye kuti yakawanda yenguva ini ndiri kushandisa iyo Debian partition saka inonyatso kukwana zvandinoda uye ini handina matambudziko nekuita. Padivi reWindows, handitomboishandisa kuti ndinakirwe neNetflix uye ndinoshanda nemidziyo yekudyidzana yakadai seAdobe suite, CorelDraw, Hofisi 2010 apo LO neKingsoft Office vasingakwanise kuvhura CV yangu nenzira yakanaka, rinova gwaro OOXML zvinyorwa zvine macro, uye neapo neapo mutambo weF2P uyo usina kana chiteshi cheLinux. Sezvineiwo, pane nguva shoma dzandinotendeukira kuWindows pane yangu PC uye kazhinji ndinomira pane mamwe maPC ekudzidza uye / kana zvikonzero zvebasa.
Kunyangwe Ubuntu yakawedzera mukurumbira GNU / Linux, inofanirwawo kuyeukwa kuti nekuda kwenhamba iri kukura yevashandisi veUbuntu, patova nekuwedzera kwezviteshi zvepropeti software yeLinux natively uye kunyange Valve yakafunga kutsigira Linux. pane iyo Steam chikuva uye Andamiro, kubvira 1999, anga achishandisa Linux mumitambo yake yeArcade.
Zvisinei, ndingadai ndaifarira kuti bhuku iri rakaburitswa muhurukuro, nekuti pano nyaya yeDual Boot ichiri chirevo.
Ini ndichataura chinhu chimwe chete: iyo nyika haisi nhema kana chena asi huwandu hwegrey.
Ini ndoziva kuti akadai pandev92, uye iye ari chete pa internet kuve yakaipa troll uye kumutsa makakatanwa uye zvinonzwisisika iye ari kupindira munyika yezvematongerwo enyika achitsigira varombo vanokodzera kupiswa nasatan sevanhu vePP vanovenga 90% kubva kuSpain, asi chokwadika, iyi ndeye yemahara blog uye riffraff, saka unofanirwa kumutendera kuti ataure.
ziso nekusvipa .. http://imgur.com/Rgmd5UY
rusununguko kufunga! = kuvhura pfungwa
Ini ndaireva kuti anotenda zvakasimba mune openource asi isu tatoona kuti hapana linux kana bsd kana kuti ari kuita zvakanaka xD
D: Ndakaongororwa zviratidzo zvandinofarira kushandisa zvakanyanya xD, mushure me bsd kana (yaive iyi: isa chirongwa chako chekuvhura pano)
LOL? Uye chii icho chine chekuita nezve iyo posvo? kuti anotenda mune openource hakuna kumuita kuti afambe sevamwe vachimuudza kuti asashandise Windows uye kupopota nezvake. Totally offtopic tete.Dzokera kune batcave xd.
Zvinoita sekunge kwandiri kuti posvo iyi hairatidzi kupokana kwatinogona kurarama zuva nezuva. Semuenzaniso, ini ndinogona kuguta nekuenda kuchikoro kana kuenda kubasa, ndikaona kuti ndinogona kudzidza zvakawanda kana kuve nekubudirira mune imwe nharaunda. Nekudaro, izvo zvinorega chokwadi chedu chatiri uye zvinogona kunge zvakaoma kwazvo kubvisa izvo kubva muhupenyu hwedu uye kutora dzimwe nzira. Pamwe vashoma (kubva ikozvino zvichienda mberi, vane rombo rakanaka) vachatora mireza ndokusvetukira mudziva iro pasina anoziva kana riine mvura kana kwete.
Iwe unokanganwa, pandev92, kuti kune mahofisi pabasa anoita kuti zvikone kushandisa software yemahara uye zvimwe zvehunyanzvi hunhu izvo zvinoita kuti zvikone kushandisa. Muenzaniso wakajeka kushandiswa kweCAD. Cherekedza kuti kunyangwe ivo vanogadzira yemahara software yeCAD vanokuudza kuti yavo software haisati yakwana zvakakwana kuti iite chaiyo mabasa (inyaya yekuona kuti nei FreeCAD, imwe yeanoratidzira mapurojekiti eCAD mune yemahara software, ichiri mubazi rayo 0.x, kunyangwe hazvo makore mazhinji [iye munhu akachena anogona kutowana kare ruzivo muOpenCascade rezinesi, chikamu chakakosha chechirongwa ichocho)).
Mubasa rekuongorora rehunyanzvi rinondinetsa, zvakakosha kupa mhedzisiro kuzvinhu zvakasiyana zveHurumende, izvo zvinongogamuchira mhedzisiro kubva kuzvirongwa zvepfuma (mukushaikwa kwesoftware yemahara inogona kuzviita). Kugadzira imwe yeaya softwares ibasa rakakura, asi nditende ini kuti isu tave kutofambisa vanoteedzera vemahara software kugadzira dzimwe nzira.
Uye zvakare, kazhinji kubasa iwe unomanikidzwa kutora zvivakwa zvinosarudzwa, hapana chakafanana nekuisa yako yega sisitimu uye iwe unogona kushanda. Icho chinhu chakanyanya kuomarara kupfuura icho. Senyaya yangu, mazhinji maitiro anoitwa neWindows uye hapana imwe sarudzo yeimwe inoshanda sisitimu. Izvo zvakapusa
Chekupedzisira, iwe unokanganwa kutaura kuti hurumende zhinji (99,5%?) Shandisa software yekudyara seyakajairwa, saka izvo zvaunofanirwa kuendesa zvinofanirwa kunge zviri muchimiro chavanokumbira. Nenzira iyi, vanokumanikidza mune mamwe maitiro kuti utenge yako yepamhepo software (kana zvigadzirwa zvacho sezvitupa zvedigital), usina mukana wekuzviisa papuratifomu yemahara.
Kune izvi nezvimwe zvinhu zvakawanda, zvinoita kwandiri kuti fungidziro yebasa haisi chikonzero, nekuti zvinosuwisa kuti tinofanirwa kushanda kuti tikwanise kuwana imwe mari yekugona kurarama pasina humbozha. Ini ndinoona kuongorora kwako kweiyi poindi kwakanyanya uye ndinovimba kuti iwe nevamwe vashandisi vasingazive nezve chikamu chebasa torai chikonzero pamusoro pekuti nyika inofamba sei.
Kunyangwe ndichishandisa software yekambani, zvinoita kwandiri kuti zvakakosha kugadzira zano rekutamira kune yemahara software munzvimbo yebasa (ndinoona izvi zvisingaite mumakambani makuru). Semuenzaniso, mukambani mandinoshandira, ndinotenda kuti tisu chete kambani (ndinovimba kwete kudaro) munyika ino inofanirwa kutumira mishumo yayo kuHurumende kuburikidza nemishumo (muPDF) inogadzirwa neLaTeX, ichishandisa Inkscape, Python, zvirongwa zvesaenzi. muPython uye zvinyorwa zvako.
Ini ndinotenda zvakasimba kuti yemahara software chishandiso chine simba kwazvo, asi isu hatifanire kufuratira iro rakakura basa rinoitwa nemakambani mukutsigira proprietary software ayo ane mukana munzvimbo dzakasiyana siyana, asi ndinovimba mazuva avo akaverengwa.
Ini handidi Windows, ndinovenga kuishandisa, asi pandinofanira kuzviita, hapana imwe sarudzo. Pfungwa iyi ndeyekuramba uchirarama pfungwa yekuti yemahara software ndiyo yega nzira inogona kugara munyika yakati siyanei. Nenzira iyi, iwe unoziva nezvedambudziko uye nekukurumidza kana kuti gare gare iwe unomukira kuenda kumberi uye zvachose kana kupotsa zvachose nzira iyo isingakuchengetedze uchifara.
Ipa mukomana uyu menduru.
Handikwanise kukupa laiks; (
Pindura kune waflessnet
Zvakanaka, ndinoziva izvi hazvisi Disqus, asi zvirinani kuti iyi yekutsoropodza sisitimu yekutsika.
Ndicho chakanyanya kupusa positi chandati ndamboona, mushure mekuita kwemumwe mudzidzi wema system achingopopota achipesana ne winbug pasina munhu akataura chero chinhu kwaari. Icho kupusa nekuti kunyangwe iwe uchifunga kuti pachave nevanhu vanoshandisa winbug hazvisi zvekunakidzwa pachayo, hazvisi nekuti ini ndinoda kushandisa winbug asi kunongedza 1. Sezvo mune masystem iwe unofanirwa kuziva uye kuziva mashandisiro ese kana mazhinji eiyo aripo OS, ikozvino imwe pfungwa 2 ndeyekuve akaomesa gamer, kunyangwe ini ndaizvitsvakira ini nzira yekugona kutamba Battlefield 4 nemazhinji mazita matsva e Mitambo yemavhidhiyo haigone kushandiswa, iko kuravira kwakabatana nehukuru hwakaipa iyo winbug, saka iwe »kana iwe usina aya maviri matambudziko kana zvido, usataurire vamwe vanhu vachipokana zvisina maturo vasingazive mamiriro echokwadi emunhu wega wega. Naizvozvo ini NDINOSHANDISA winbug asi ini handikurudzire uye ini ndinokurudzira kushandisa linux! sei ? nekuti inokodzera ini.
Vanhu vaunotaura vanongova varevi venhema uye iwe unoziva chirevo chekare chakakurumbira: "Murevi wenhema anowanikwa nekukurumidza kupfuura munhu akaremara."
Ini handinzwisise kuti sei mumwe munhu akatenga chimwe chinhu kubva kuApple kana Microsoft obva ati igehena, mumwe wevaviri kana ane dambudziko kana benzi (zvinosuwisa kuti kune akawanda ekupedzisira).
Ndine Android x86 yakaiswa paPC lol 😛
Iye zvino kutaura nezve chimwe chinhu chakakosha. Ini ndinofunga iwo musoro wakanaka asi haisi nzvimbo yakanaka yekukurukura nezvazvo. Ngatirangarirei zvakaitirwa DesdeLinux: batsira vatsva vasingatambure kana vachiisa gentoo ... Kana chimwe chinhu chakadai.
Ndosaka ichinzi Openource uzivi, iwe unogara uchifunga nezvazvo uye unoedza kuzvishandisa muhupenyu hwako.
Ini ndinoshandisa linux kune zvese. uye hongu ichokwadi ini ndasara nechido chekutamba xd!.
Izvo zvinoitika ndezvekuti munyori akawira mune zvakaipa zveEvangelising system, chimwe chinhu icho vazhinji vevamwe vangu vasingagoni kuita kana kugona kuita mune yekuve masisitimu mainjiniya. Kunyangwe iro zita rekutuka rinoda kuti ndizive nezve masystem, uye imwe yacho ndeyekuti ini ndinoda kutamba mitambo yemavhidhiyo yazvino…. Izvo iwe zvaunofanirwa kudzidzisa kumira kumisikidza evhangeri kuchisimudzira asi hazvireve kuti iwe haushandise kana haugone kushandisa kana hauzive mashandisiro evamwe. ZVAKAIPA! nemunyori.
Zvakanaka, ndiri kurevesa; Ini ndinoda GNU / Linux uye ndinoishandisa zvakanyanya, asi kubva pane zvandakadzidza (Graphic Dhizaini) ndinofanira kushandisa yeAdhibhodhi software, ndinogona kudzidza kushandisa emahara dhizaini zvirongwa senge INkscape kana GIMP asi chokwadi ndechekuti ndanga ndine nungo kudzidza kuzvishandisa, asi handirambe kuti ndinoshandisa windows, handizvide, asi inguva yangu. Kwaziso!
Chokwadi Nyaya, shamwari yangu. Nyaya yechokwadi.
Uye nenzira, kusvikira GIMP, Inkscape uye Scribus vasabatana majoini kusimudzira kushandiswa kwayo mumasangano edzidzo?
Chokwadi ndechekuti, isu takasununguka kushandisa Open, Yemahara uye Yakabhadharwa software. (Nguva dzose usawane Pirated xD)
Ini ndinoenderana nemazwi angu nezviito, tarisa chete: [chirevo] Ndiri kunyora kubva kuWindows 8.1 ine yakawanda yekushambadzira mafomu uye mune mbiri bhutsu ine openSUSE nekuti ini ndoda, kunyangwe ndisina chikonzero chekuishandisa [/ chirevo]
Ini handina kushandisa Windows kwenguva yakareba zvekuti ndatobvisa hard drive kwandave naro, ndinongoisiya mukati mekombuta yangu kuitira kana ndingaida mune emergency.
Kunyangwe hongu, ini ndine Hofisi, Photoshop uye League of Legends yakaiswa kuburikidza neWine. Zvakare, haazi ese echinyakare software andaisa akasununguka, semuenzaniso, ini ndinoshandisa Steam, Opera naMaxthon, iyo yandinoedza izvozvi.
Ivan Gabriel akadaro
"(Nhema!)" Icho chinhu chaicho!
Kare. teamviewer ndiyo yega inochengetwa pamachini angu. Uye zvechinyorwa, inomhanya muWine xD
Ndiri kuonawo chinonakidza shanduko yemaitiro: shamwari dzaimbove dzisati dzaziva chero chinhu kunze kweWindow $ (pikicha yavo mukwere ...), ikozvino vaine Ubuntu kana Mint muDual Boot, asi chakanakisa chinhu ... kuti vanoishandisa!
Inononoka, inononoka, asi mazhinji maLinux distros ari kusiya "zvakajairwa" nharaunda kuti asvike kune asina ruzivo mushandisi, iye anovhura browser, hofisi uye neapo neapo mutambo wakasarudzika. Izvo zvakanaka.
Pindura kuna Ivan Gabriel
chinyorwa chakanaka (mhinduro yakanyorwa kubva pamahwindo)
Pindura kune beofox
Mukudzivirira kwangu kure ndine nzira dzinoverengeka dzinotepfenyura marara eTV, unoreva here kuti ndinozvishandisa? Kuti ini ndiri munyengeri wekusavabvisa?
Ndakave neWindows neLinux paPC yangu kwemakore gumi nemapfumbamwe. Dai ndaingova neLinux chete, zvinoshamisa kuti handingashandise Windows zvishoma. Ini ndinozviita pachena kuti kuva nesarudzo ini kwandinoda nekure zvikamu zveLinux.
Ini ndinoona zvichishungurudza kuona kuti kubva kune unix divi rezvinhu Windows inotsoropodzwa mahara uye isina kuuya mupfungwa kakawanda.
windows haisi yakaipa system pachayo. chichava chemuridzi uye zvese izvo asi sedesktop system inopa izvo zvinonyanya kudiwa nevashandisi. tanga umhanye. zvachose kuisa putifotos ku "feisbuk" uye zvimwe zvishoma ... zvirokwazvo saka ini se sysadmin kubasa ndaisazomboshandisa windows nekuti haina maturusi (mumaonero angu).
Zvakanaka, ini handiwanzo piss windows uye kunyangwe ndanga ndiri akavimbika uye ndinofara mushandisi wedebian kweanopfuura gore, ndiri mumwe weavo vane dualboot kungoita akati wandei mitambo. ndosaka ndiri neshungu yekuona zvinounzwa nemhepo kune linux world.
Isu takafanana neDebian + Windows mbiri-bhuti. Pamusoro pezvo, hunyengeri hwenyika yePOSIX hunonyanya kukonzerwa nevaFarisei fanboys vanoputsa kushivirira kwedu.
Longinos Recuero Mabhazi akadaro
Ndozvazviri. Makazvifumura zvakajeka kupfuura mvura.
Ndakafarira mharidzo yako. Makorokoto pane izvo.
Pindura kuna Longinos Recuero Bustos
Ini ndinobvumirana 100% nemaonero ako ...
Saka kana ndiri akapindwa muropa nezvinodhaka, handikwanise kuudza shamwari yangu kuti isashandise zvinodhaka, kunyangwe zvakaipa, nekuti ndinodaro? ...
Zvakanaka tarisa, zvese zvine hukama, zvinoenderana nekuti unozvitarisa sei. Uye ini ndinokuudza kuti ndinoda Linux.
Ini ndinoshandisa Windows kuhofisi nekuti takabhadhara makomputa edesktop, ayo anoiswa mucherechedzo uye anouya neWindows nekukasira, asi pamaseva tinoshandisa Ubuntu Server uye tiri munzira yekuchinjira kuRed Hat
Iyo kambani kwandaimboshanda kare yaive Microsoft mudiwa, saka zvese, zvese zvese zvaive Microsoft Windows (hongu, Server 2003 kusvika 2012, System Center Kugadziridza / Dziviriro Dhata / Kushanda 2007 uye 2012, ISA Server kana TMG, .NET, SQL Server, nezvimwe. ). Uye zvese zvaive zvakavakirwa pamitemo yeMicrosoft.
Ini ndinofunga kuti kunyangwe uine Linux sei, iwe unofanirwa kuziva matekinoroji ese, muchokwadi makomputa nyanzvi vanofanirwa kuziva mativi ese emari, uye mune dzakawanda kesi hatina sarudzo, chete izvo zvinopihwa nemutengi, hazvibatsiri kuve shasha Linux kana iwe usingazive chero chinhu nezveWindows uye kuti inoshanda sei, uye zvinopesana.
Ini ndine yangu maonero nezve yekusingaperi Windows vs Linux kurwa, asi pakupera kwezuva, kambani yega yega uye munhu wega wega anoshandisa izvo zvinoita sezvakanaka kwavari, kana izvo zvavanogona kuita, kubva ipapo, kana kambani ikubatira iwe, unofanirwa gadzirisa zvakanaka nezvavanokupa uye gadzirisa. Ndakaona linuxeros ichikundikana neakaongororwa eWindows / Microsoft masisitimu uye zvinopesana futi
Uye zvakanaka ipfungwa yekuve sysadmin kana musimudziri kana mumunda waunokudziridza munharaunda yezviri IT.
Iwe haugone kutenderera uchiti iwe unongoziva ichi kana icho chinhu, icho kwandiri chinopesana nehunyanzvi, +1000.
Ndokumbirawo mupe uyu anopindura menduru yegoridhe kune akanakisa maonero maonero a2014.
GnuLinux Rusununguko akadaro
Zvekuti unorega kurarama hazvina kunyatso zadziswa, ndinoda kuita zvese mu Gnu / Linux asi kana vasingandibvumidze kuti ndigare kuyunivhesiti, nekuti imwe software yebasa rangu ndeye ma windows chete, iyo nyaya yekuti tinoshandisa mbiri bhutsu haina Imhaka yekuti isu tinoda kana nyaya yangu haisi iyo, hongu isu tinofanirwa kusimudzira yemahara software kunyangwe tikashandisa windows, ibasa redu sevagari, uye kana iwe ukatenga piritsi neIOS ndiyo imwe nyaya yakasiyana, chokwadi ndechekuti handibvumirane zvakanyanya nepositi yako asi ndizvo zvazviri.
Pindura kuna GnuLinuxLibertad
Zvizere bvumirana. Ini zvakare ndinoshandisa Windows, uye ichokwadi kuti nguva zhinji ini handina sarudzo (ini ndiri inveterate gamer), uye ndinobvuma kuti chinhu chakaipisisa chiripo Apple…. asi sezvo "kutonhorera" ...
Isu tese takasununguka kutsoropodza zvatinoda uye panguva imwechete kushandisa zvatinoda, kana tiri vashandisi veLinux, hatisi kuzoita saWindero, uye izvo zvinoreva kusamanikidza chero munhu kana kuendesa vanhu kunzvimbo yako.
Kune yangu imba pamba nguva chete yandaive nekaviri bhutsu yaive ya2 Kubuntu (ini handirangarire vhezheni ipi), imwe nekuti yaive yakagadzikana kushanda, kutamba, nezvimwe uye imwe yacho vhezheni yakaedza zvinhu zvekuti kana ndikazvityora, zvaive zvakakodzera! Iyo chete nzvimbo yandinoshandisa Windows uye haisi yangu yekuzvisarudzira, iri kushanda!
Ini handidi kupopotera Windows! (X inozviita kana chete) Ini ndinoshandisa GNU / Linux kune ese mabhenefiti ayo SL anondipa, ini ndinoda windows zvirinani uye zviuru zvimwe mapoinzi! ndizvo zvandinokurudzira zvachose ndisingaite fan fan yeSL kana anti Win.
Kana ndikatsvaga kusagadzikana muhupenyu, mune ese mativi uye hongu, sekutaura kwako, hunyengeri hahusi mune zvemagariro chete, asi zvakare mune tekinoroji. Mufaro!
Zvakanaka, mumwe munhu akanzwisisa chinyorwa, hapana nguva yandakambotaura kuti usashandise windows, kana panguva ipi zvayo ndati hapana mana kana mashanu anochida chaizvo mumabasa avo nekuti vanoshanda mune imwe komputa kana yehurumende yekudhinda kambani (iyo havasi vese, ndoda kuwanda), asi kana iwe ukaishandisa kumba, usaende semahara software troll, nekuti hapana anoitsigira.
Mazhinji emakomendi anobva kuWindows, vanhu vari kungotsvaga nzvimbo yekuve yavo, vanogona kuti Linux ndiyo yakanakisa asi ivo vanoramba vachishandisa Windows uye haina kushata, Bender anototi "Munhu wese akazviita ini ndaingoda kuve nemukurumbira", ndechimwe chinhu zvakajairika zvevanhu, uye linux ndeyemafashoni hehe, assholes
uye kutaura kumwe chete uku kunodzokororwa svosve-NSA, SOPA nezvimwe zvisina maturo ... vazhinji vanozvidaidza kuti vapanduki uye vanodzivirira zino rewebhu rakavhurika nezvipikiri uye vanozviita kubva kuOSX neWindows oO ... kupokana kupi?
Kutaura chokwadi, ini handina basa nenyaya iyi ... Ini ndaingogona kungoti chero munhu anouya kuzotaura kuti mhinduro yesystem irinani pane yandinowanzo shandisa haindikurudzire mudiki kutamira kuchikuva icho. Kana ndikafunga kutambisa nguva chaiyo (zvirinani sekufunga kwangu) kushandisa akati wandei mashandiro pakombuta imwe chete. Kana iwe ukashandisa chimwe chinhu senge gnu linux unofanirwa kujekesa kuti ndeapi matambudziko auri kuda kugadzirisa mukuita kwangu akakunda ndinotenda kuti chokwadi ichi ndicho chinoita kuti vanhu vazhinji vaise mamwe masisitimu pamakomputa avo asingatsoropodzi pakupedzisira iwe unogona kuita nehupenyu hwako izvo zvinouya kwauri mukuda !!
Ini ndaishandisa Linux uye ndinobvumirana nazvo. Zvakaoma here kuzvigamuchira? Dai zvaive kubva pane zvandinoona mumaforamu, ini ndaiti Linux neOSX ndiwo masisitimu mazhinji uye zvinopesana.
Nenzira iyo elav, "rarama uye rega urarame" haishande kune iye akasika chinyorwa, chokwadi ndechekuti vanhu vanoshoropodza Windows kuti "vanotonhorera" asi vachishandisa, vari kunyepedzera, zvinogara zvakanaka kupa kushoropodza kunovaka nezvazvo. Uye hongu, mumwe nemumwe anofanira kurega mumwe achisarudza zvavanoda, asi ngatiregei kuva vanyengeri zvekuti vazhinji vangadawo kuti kuve nevashandisi vazhinji paLinux ndosaka vazhinji vachiedza kugutsa vamwe vanhu nezvezvakanakira Linux. Ini pachangu ndinoshandisa Linux uye chete Linux (yazvino), asi kana ikauya nguva iyo Linux isingandipe izvo zvandinoda, ndakachinjira kune imwe OS, iyo yaakandipa, nguva. Tinofanira kukurudzira OS zvinoenderana nezvino tariswa uye nezvinodiwa nemumwe mushandisi, kwete zvinoenderana nezvatinoda.
Ini ndinoona kuburitsa kwako kwakanakisa! Chinyorwa chakanaka kwazvo.
Ichokwadi kwazvo pachinyorwa chino, asi izvo zvinoitika nekuti, "dhiyabhorosi", inopa zvinoshandiswa zviri nyore kushandisa kune ese marudzi ezviitiko, izvo zvisiri izvo muLinux. MuLinux kugadzirisa zvinhu zvakawanda kana huwandu hwakawanda, iwe unofanirwa kuenda kune iyo terminal. Iko kune imwe kana imwe graphic application, asi haishande chaizvo kana kusaita zvese zvavanofanirwa kuita. Na ho by b, iwe unogara uchifanira kuenda kune iyo terminal. Nhasi, sekutaura kwaLao mudiki nhasi, "zvaive." Siya iyo term kune avo vanonzwa kunge macomputer maboss, vashandisi vari kutsvaga chimwe chinhu, pakati pavo, kuve nyore uye nekumhanyisa. Pane chikonzero nei, "dhiyabhorosi" ichiri kushandiswa.
Zuva reLinux rinopa EQUAL kana SUPERIOR mhinduro, munzvimbo dzese dzemakomputa, "DIABHORA" anonyangarika. Asi, pamwero watiri kuenda, ndinofunga Linux haizombofa yakanyanyisa kushamisa Dhiyabhorosi. Sei ... ini handizive, asi zvese izvi zvinoshamisa. Makore ehupenyu ane linux uye zvakadaro haatomboenzana iyo nadhiyabhorosi. Ini ndinodzokorora, zvinoita kunge zvisingaite kwazvo. Chii chiripo kupfuura, chii chinotadzisa Linux kubva mukurova chaizvo Windows? Ini ndinenge ndave kuda kubhadhara rezinesi yeLinux iyo inondipa zvakafanana neWindows, yakawedzerwa kune kunaka kwainayo kare, zvine chekuita neyekupedzisira.
Uyo anozvarwa Windowslerdo achadaro nekusingaperi. Uye ivo havana kunyara, ivo vanotozvitaridza ne "zvinyorwa" zvavo.
Ini ndinoedza nepandinogona napo kuti ndisashandise proprietary software. Uye ini handishandise Windows zvachose, asi haisati iri chinhu chinoshamisa. Chinhu chinoshamisa, kana kuti chinhu chakarurama, ndechekushandira pamwe nekusimudza mabhugi, kupa, kupa mitsara yekodhi, uye kuwana chimwe cheizvi zvitatu kuchichisimudzira. Ziva kuti ndizvo zvandinoda, zvandinoshuvira, uye ini handidi kukuudza kuti zvinofanirwa kunge zvakadaro.
Chinhu chakakosha ndechekuti vaite shanduko.
Ichi hachisi posvo… Chinyorwa chemafungiro! Ini ndiri vaviri mushandisi, asi kwete zvekunakidzwa, ini ndinogadzira makomputa uye vangangoita vese vatengi vangu vanoshandisa cherries (saizvozvowo, nekuseka uye zvese). Ini handikwanise kubuda mutsika kusvika Linux irowo rinonyanya kushandiswa system pane desktop PC uye malaptop (ayo andinovimba achakurumidza chaizvo). Kunyange zvakadaro, mukova unoshungurudza! Zvido.
Pindura El Vyasa
Iko kukosha kwekuve negadziriro yeparutivi uye zvimwe zvishandiso kuti uzviite
Macopix: Ungaita sei kuti uwane musikana chaiye pane desktop yako (ArchLinux)